La sameyta ganacsi DNR inta uu jiro COVID-19 | Minnesota DNR
Iyada oo ka ah qayb la tacaalida cudurka faafa COVID-19 ee Minnesota, waxaan dib u dhigaynaa, wax ka beddeleenaa, oo aan joojineynaa munaasabado iyo adeegyo dadweyne oo kala duwan.
Xafiisyada DNR way ka xiran yihiin dadweynaha wakhtigan lagu jiro. Hoos waxaa ku qoran jawaabaha su'aalaha aan helnay ee ku saabsan sida loo sii wado la ganacsiga DNR inta ay xafiisyadeena ka xiran yihiin dadweynaha.
Marka lagu daro macluumaadka gaarka ah ee DNR ee hoos ku qoran, waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad guud oo dheeraad ah oo kusaabsan qaabka tilaabo-tilaabada ah ee dib loogu furayo ganacsiyo iyo goobo bulshadeeed kala duwan Stay Safe Plan (Qorshaha Ku sii Jir Badbaadada) ee Minnesota.
Iibinta Ruqsada (Leesin), Isdiiwaangelinta iyo Fasallada Amaanka
Gawaarida iyo doomaha kala duwan waxay u baahan yihiin isdiiwaangalin iyo ruqsado (leesimo), waxaana jira waxqabadyo badan ee u baahan ruqsad ama oggolaansho ku habboon – sida ugaarsiga iyo kalluumeysiga. Isdiiwaangelinnadan, ruqsadahan iyo oggolaanshooyinkan ayaa u oggolaanaya DNR inay dhawrto oo ay ilaaliso kheyraadka/ilaha dabiiciga ah iyadoo sidoo kale siineeysa fursadaha madaddaalada bannaanada dhammaan dadka Minnesota.
Xarunteena Macluumaadka ayaa ka jawaabi kara su'aalaha ku saabsan sida loo iibsado ruqsadaha/leesinada ugaarsiga ama kalluumeysiga iyada oo la wacayo Xarunta Macluumaadka DNR 888-646-6367 oo lagu weydiisanayo caawimaad Afka Soomaaliga.
Su'aalaha ku saabsan dib-u-cusboonaysiinta isdiiwaangelinnada iyo leesinada/ruqsadaha dhammaan gawaarida ku socda wadooyinka oo dhan (ATVs), gawaarida ku socda wadada aan jidka ahayn, mootooyinka ku socda wadada aan jidka weyn ahayn, mootooyinka-barafka ama doomaha, wac 800-285-2000 oo ku weydiiso caawimaad Afka Soomaaliga.
Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad ku saabsan casharada amniga ee hubka, mootada-barafka ama gaariga ku socda wadooyinka oo dhan (ATV), ama haddii aad jeclaan lahayd macluumaad ku saabsan sida loo diiwaangaliyo shimbirtaada turkey-ga, orsodaada, ama sagaaradaada aad ugaarsatay, fadlan wac 888-646-6367 oo ku weydiiso caawimaad Afka Soomaaliga.
Waxyaabaha soo socda waxaa lagu iibsan karaa online-ahaan:
Leesinnada/ruqsadaha kalluumaysiga, ugaarsiga iyo dabida Tiimbarayaasha ugaarsiga iyo kalluumaysiga
Fadlan la soco in booga intarnetka iibka leesinka ee online-ka lagu heli karo kaliya afka Ingiriisiga. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan sida loo isticmaalo nidaamka, fadlan ka wac Xarunta Macluumaadka ee DNR lambarka 888-646-6367.
Codsiyada bakhtiyaa-nasiibka ugaarsashada
Cusboonaysiinta leesinnada ee noloshaada oo dhan ah
Oggalaanshayada aruursashada bariiska duurka ka baxa
Waraaqaha marid oggolaanshaha wadada loogu talagalay Skiing-ka iyo faras kusocodka
Ka sameynta nuqul shahaadooyinka tababarka badbaadada
Dib-u-cusbooneysiinta ruqsada doonta, ATV, mootada ku socota wadada aan jidka weyn ahayn, mootada barafka iyo gawaarida ku socda wadada aan jidka ahayn.
Iibsashada Oggolaanshaha Jardiinada/Beeraha
Dhamaan gawaarida galaya meelaha jardiinooyinka/beeraha gobolka waa iney heystaan oggolaanshaha gaariga ee Jardiinka/Beerta Gobolka Minnesota oo ay wali muddadiisa shaqeynayso.
Waxaad ka iibsan kartaa oggolaanshaha jardiinka/beerta ee maalinlaha ah ama sanadlaha ah dukaanada laga helo dhammaan meelaha jardiinooyinka/beeraha gobolka Minnesota. Hadaad jeceshahay inaad ku iibsato oggolaansho sanadle ah taleefanka, waad sameyn kartaa sidaa adigoo ka wacaya Gooseberry Falls State Park taleefanka 218-595-7100 (riix 0). Adeegyada turjumaanka luqadaha ayaa la heli karaa.
Oggolaanshaha sanadlaha ee $35 wuxuu ku siinayaa booqashooyin aan xadidneyn oo aad ku booqato dhammaan 75-ka jardiinooyinka/beeraha iyo meelaha lagu madadaasho ee gobolka Minnesota muddo sannad dhan ah laga bilaabo bisha iibsashada. Lacagaha oggolaanshaha gaariga ee dheeraadka ah waa sida soo socda:
• $ 26 si aad u hesho oggalaansho gaari oo sanadka oo dhan ah oo loogu talagalay gaari labaad oo isla qoyska ah
• $ 30 oggolaansho sanadlaha ah ee mootada
• $ 7 oggolaansho halka maalin ah ee gaariga
• $ 5 Oggalaansho halka maalin ah ee kooxda
• Dadka naafada ee ciidan ka soo qayb qaatay iyo shaqaalaha milatariga ee hadda ku jiro shaqadda waxay heli karaan oggolaansho gaari oo lacag dhimis ah ama lacag la’aan ah.
Markii aad iibsato oggolaansho/ruqsad, waxaad gacan ka geysaneysaa hagaajinta iyo fiicnaynta ilaha dabiiciga ah, xarumaha, iyo barnaamijyada wax-barashada iyo wacyigelinta ee ka dhigaya jardiinooyinka gobolka Minnesota kuwa dalka ugu wanaagsan.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Minnesota State Parks Permit page. (Fadlan la soco: boggan waxaa lagu heli karaa Af Ingiriisiga keliya.)
Haddii aad qabto su'aalo oo ku saabsan waxyaabaha soo socda, fadlan riix link-iga si aad u hesho macluumaad:
Hawlaha iyo xarumaha madadaalada ee banaanada
Dib-u-furida meelaha-kamyada si u leh badbaado
Dib-u-furida jartarka iyo doomanka dusha ka furan si u leh badbaado
Wixii ku saabsan dhamaan su’aalaha kale, fadlan ka wac Xarunta Macluumaadka ee lambarka DNR 888-646-6367 oo ku weydiiso caawimaad Afka Soomaaliga.